Manampahefana - Fanampiny Magnesium L-Threonate: tombontsoa, ​​fatra
Home > Magnesium L-Threonate Mamy
Raha mitady lafatra ianao Magnesium L-Threonate fanampiny, mamporisika ny fividianana ny vovo-Magnesium Threonate avy any Cofttek izahay. Nanambara ny orinasa fa manatsara ny maha-biôlôjika ny maneziôma amin'ny vatana. Ny orinasa koa dia nanambara fa ny vovoka nomen'ny orinasa dia manohana ny asan'ny fahatsiarovana ary manatsara ny fiasan'ny kognita amin'ny ankapobeny. Manampy ireo mpampiasa torimaso tsara ihany koa izy ireo. Cofttek dia mpamatsy Magnesium L-Threonate izay hivarotra anao ihany no hahomby entana.
Inona no atao hoe Mag nesium L-Threonate?
Inona no ampiasaina amin'ny magnesium L Threonate?
Tsara kokoa ve ny manezioma Threonate?
Tsara kokoa noho ny magnesium citrate ve ny magnesium Glycinate?
Inona no fanafody tsy tokony ho raisinao amin'ny magnesium?
Manezioma ve ny manezioma?
Firy mg ny manezioma L Threonate no tokony ho raiko?
Iza amin'ireo manezioma no mety amin'ny fanahiana?
Afaka manampy ny zavona amin'ny atidoha ve ny manezioma?
Manasitrana ny ati-doha ve ny maneziôma?
Miteraka tsy fahampiana ve ny maneziôma?
Ny magnesium L Threonate ve mety amin'ny tsindry?
Inona ny magnesium tsara indrindra raisina isan'andro?
Inona no maha samy hafa ny manezioma citrate sy magnesium gluconate?
Iza avy ny manezioma mety amin'ny famonoana hozatra?
Tsara ho an'ny tebiteby ve ny magnesium?
Iza avy ny magnesium mety tsara hatoriana?
Inona avy ireo sakafo ilaina magnesium?
Inona avy ireo vokatry ny fihinanana maneziôma?
Miteraka fivalanana ve ny manezioma rehetra?
Mandra-pahoviana ny magnesium L Threonate no miasa?
Mahatonga Alzheimer ve ny magnesium?
Inona avy ireo soritr'aretin'ny magnesium ambany?
Afaka misoroka ny Alzheimer ve ny vitamina D?
Iza avy ny manezioma mety amin'ny hozatra?
Aleo mihinana manezioma amin'ny maraina na amin'ny alina?
Tsara ve ny magnesium amin'ny hozatra voafintina?
Afaka manampy ny fangovitana ve ny manezioma?
Tsara ho an'ny Parkinson ny magnesium?
Inona avy ireo famantarana ny manezioma ambany ao amin'ny vatana?
Manampy ny aretin'i Parkinson ve ny turmerika?
Inona no manimba ny aretin'i Parkinson?
Misy fiantraikany amin'ny fitadidy ve ny manezioma?
Manampy amin'ny oksizenina ve ny manezioma?
Manatsara ny serotoninina ve ny manezioma?
Manome angovo ve ny maneziôma?
Inona ny magnesium L Threonate tsara indrindra?
Fa maninona no tsara kokoa ny glycinate magnesium?
Mitovy amin'ny manezioma ve ny maglyly Glycérate?
Manampy anao amin'ny poop ve ny magyly glycinate?
Inona no ampiasaina amin'ny fitsaboana glycérose magnesia?
Inona no tsy tokony alainao amin'ny magnesium?
Rahoviana no tsy tokony mihinana manezioma ianao?
Ahoana no ahafantarako raha ambany ny maneziôma aho?
Mandra-pahoviana alohan'ny hatoriako no tokony hihinana maneziôma?
Inona ny vitamina tsy tokony horaisinao?
Manezioma L Threonate ve mety amin'ny fanahiana?
Iza amin'ireo karazana maneziôma no zakaina indrindra?
Azoko atao ve ny maharitra maharitra magnesium?
Ahoana no fiantraikan'ny maneziôma amin'ny fihetsiky ny tsinay?
Impiry isan'andro ianao no mila manezioma?
Inona no fomba tsara indrindra handraisana manezioma?
Maninona isika no mila magnesium L-Threonate?
Inona no atao hoe Magnesium L-threonate Side Effect?
Inona avy ireo soa azo avy amin'ny Magnesium L-threonate?
Aiza no hividianako magnesium L Threonate?
Tokony horaisina miaraka na misaraka ve ny calcium sy manezioma?
Ny asidra Threonic dia fitambaran'ny rano azo avy amin'ny famotehana metabolika ny Vitamin C. Rehefa mitambatra amin'ny magnesium ny asidra threonic dia mamorona sira antsoina hoe Magnesium L-threonate. Manezioma L-threonate mora entin'ny vatana ary noho izany dia iray amin'ireo fomba mahomby indrindra hahatonga ny manezioma hahatratra ny sela ati-doha sy ny faritra hafa amin'ny vatana. Ny manezioma nomen'ny Magnesium L-threonate dia manatanteraka asa biokimika manan-danja maro, toy ny fampidirana vitamina B, tsiranoka insuline, fananganana ATP ary proteinina ary fananganana asidra matavy. Ny mineraly koa dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fanamorana ny fiasan'ny anzima maro. Ny tena zava-dehibe dia manatsara ny fiasan'ny hery fiarovan'ny vatana amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny voka-dratsin'ny anti-viral sy anti-tumor an'ny sela mpamono voajanahary sy ny cytotoxic T-lymphocytes.
Araka ny efa voalaza tetsy aloha, ny magnesium dia azo alaina amin'ny sakafo maro manankarena amin'ny mineraly. Ny sakafo sasany izay misy magnesium amin'ny habetsany dia sôkôla mainty, zavokà, voanjo, legioma, tofu, voatavo ary chia, trondro matavy, sns. dia, noho izany, ny fangatahana fanampin-tsakafo Magnesium L-threonate dia nitombo tato anatin'ny taona vitsivitsy.
Ny fividianana Magnesium L-Threonate dia tombony ho an'ny nootropic. Mampiroborobo ny fitadidiana episodika, fianarana ary fanamafisana ny fifantohana. Ny famenon-tsakafo dia fatra resahina ho an'ireo marary mijaly noho ny fahaverezan'ny fahatsiarovana efa antitra, ADHD, dementia ary ny aretin'i Alzheimer.
ny amin 'ny Kilonga tombontsoasan'ny magnesium L-Threonate dia fanatsarana ny fitadidy. Izy io dia afaka manatsara ny haavon'ny synaptika sy ny plastika ary koa mampitombo ny habetsaky ny tranonkala famotsorana neurotransmitter ao amin'ny ati-doha.
Ity famenon-tsakafo ity dia afaka manatsara ihany koa ny fahatsiarovana ny habaka. Tao anatin'ny fandalinana voalavo iray, nihatsara 13% ny fahatsiarovana miasa aorian'ny 24 andro nisian'ny Magneisum L-Threonate. Taorian'ny famenon-tsakafo 30 andro, ny voalavo antitra dia afaka nanao fampisehoana mitovy amin'ny tanora namany.
Midika izany fa na dia mahavita manatsara ny fiasan'ny kognita aza ity fanampiana ity na amin'ny taranja tanora na antitra, dia nihatsara kokoa kosa ho an'ireo zokiolona. Raha ny marina, ny voalavo antitra dia nahita tahan'ny fanatsarana 19%, izay manan-danja raha ampitahaina amin'ny fanatsarana ny voalavo tanora 13%. Raha jerena fa ny mponina antitra dia mety iharan'ny fahaverezan'ny fahatsiarovana, io famenon-tsakafo io dia mitondra fiantraikany mahery vaika amin'ny olona antitra.
Magnesium L-threonate dia mety ho endrika maneziôma tsara indrindra ho anao raha mitady hanatsara ny fahasalaman'ny ati-doha indrindra ianao. Na dia mety hampisondrotra ny haavon'ny magnesium amin'ny vatana aza izy io amin'ny ankapobeny, dia mety ho mafy kokoa aza ny vokany ao amin'ny ati-doha amin'ity karazana magnesium ity.
Na dia misy endrika magnesium maro aza, dia aleontsika matetika mampiasa citrate manezioma sy / na glycérat magnesioma. Ny citrate manezioma dia manampy indrindra an'ireo olona mijaly noho ny fitohanana, raha toa kosa ny endrika glycise dia mahasoa kokoa amin'ny toe-javatra toy ny tebiteby, tsy fahitan-tory, adin-tsaina maharitra ary aretina.
Ny fihinanana maneziôma amin'ireto fanafody ireto dia mety hahatonga ny tosidra hidina ambany loatra. Ny sasany amin'ireto fanafody ireto dia misy nifedipine (Adalat, Procardia), verapamil (Calan, Isoptin, Verelan), diltiazem (Cardizem), isradipine (DynaCirc), felodipine (Plendil), amlodipine (Norvasc), sy ny hafa.
Fanamainana am-baravarana: manezioma manintona rano ao amin'ny tsinay, miasa ho toy ny laxative osmotic. Io fitomboan'ny rano io dia mandrisika ny fihetsiky ny tsinay. Manalefaka sy mampitombo ny haben'ny seza ihany koa izy io, ka miteraka fivontosana ny tsinay ary manampy amin'ny fanamorana ny fivalanana.
Magnesium L-threonate dia fanafody am-bava ary azo alaina amin'ny endrika takelaka na vovoka. Ny fatra marina an'ny Magnesium L-threonate na zava-mahadomelina dia miankina amin'ny taona sy ny fahasalaman'ny olona mandray azy ary koa ny antony anaovana ny fanafody. Amin'ny ankapobeny, ny vehivavy eo anelanelan'ny 19 sy 30 dia asaina mifikitra amin'ny fatra 310 mg isan'andro ary ny lehilahy ao amin'ny sokajin-taona mitovy dia tsy maintsy mifikitra amin'ny fatran'ny 400 mg isan'andro. Ny lehilahy antitra dia afaka mampitombo ny fatrany hatramin'ny 420 mg isan'andro ary ny vehivavy ao amin'io sokajin-taona io dia tokony handany 360 mg Magnesium L-threonate isan'andro mba hahazoana vokatra tsara indrindra. Ny vehivavy mpampinono dia afaka mihinana an'io fanafody io ihany koa. Na izany aza, tokony hihazona ny fihinan'izy ireo isan'andro amin'ny Magnesium L-threonate latsaky ny 320 mg isan'andro.
Raha maka ny Magnesium L-threonate ianao amin'ny toe-javatra manokana, dia mila manitsy ny fatranao ianao mifototra amin'ny tanjona anaovana ny fanafody. Ohatra, raha maka Magnesium L-threonate ianao amin'ny olana mifandraika amin'ny fandevonan-kanina, dia asaina ianao handray 400-1200 mg isan'andro. Raha maka ny fanampiny ianao hanamafisana ny fiasan'ny fahatsiarovan-tena, dia mila mandany 1000 mg ny Magnesium L-threonate isan'andro. Ho an'ny torimaso tsara dia ampy ho an'ny lehilahy ny 400-420 mg ny Magnesium L-threonate ary ampy ho an'ny vehivavy ny 310 ka hatramin'ny 360 mg.
Ny magnesium dia matetika mifatotra amin'ny akora hafa mba hahamora ny fifohana ny vatana azy. Ny karazana magnesium isan-karazany dia sokajiana araka ireo akora mifamatotra ireo. Ny karazana magnesium isan-karazany dia misy:
Glycérate manezioma. Matetika ampiasaina hampihenana ny fanaintainan'ny hozatra.
Magnesium oxide. Ampiasaina matetika hitsaboana migraines sy fitohanana.
Manezioma sitrat. Mora entin'ny vatana ary ampiasaina hitsaboana ny fitohanana.
Magnesium klôro. Mora resin'ny vatana ny vatana. S
Magnesium sulfate (sira Epsom). Amin'ny ankapobeny, tsy dia atosiky ny vatana mora loatra nefa mety hoentin'ny hoditra.
Lactate manezioma. Matetika ampiasaina ho toy ny sakafo additive.
Araka ny fanadihadian'ny 2017 momba ny fandalinana, ny ankamaroan'ny fandinihana mifandraika amin'ny maneziôma sy ny tebiteby dia mampiasa lactate magnesium na magnesium oxide. Ny glycérat magnesière dia mora raisina ary mety manana toetra mampitony. Mety hampihena ny fanahiana, ny famoizam-po, ny adin-tsaina ary ny tsy fahitan-tory. Na izany aza, voafetra ny porofo ara-tsiansa momba ireo fampiasana ireo, ka mila fikarohana bebe kokoa. Ny glycinate magnesium dia matetika ampiasaina amin'ny vokany mampitony mba hitsaboana ny fitaintainanana, ny fahaketrahana ary ny tsy fahitan-tory.
Matetika antsoina hoe zavona amin'ny ati-doha, fahalalana tsy miadana na fahasarotana amin'ny fifantohana sy fahatsiarovana dia afaka manondro ny tsy fahampian'ny magnesium. Manezioma ilaina amin'ny ati-doha ny magnesium, ka raha tsy misy azy dia tsy afaka mihetsika koa ny ati-doha.
Ny magnesium dia mpiandry vavahady ho an'ny mpandray reseptor NMDA, izay tafiditra amin'ny fampivoarana ny ati-doha, fahatsiarovana ary fianarana. Izy io dia misoroka ny sela nerveuse tsy ho be loatra ny fiheverana, izay mety hahafaty azy ireo ary mety hanimba ny ati-doha.
Ny fanadihadiana vaovao navoaka tao amin'ny diary Neurology dia manondro fa na ny ambaratonga manezioma avo dia avo sy ambany dia ambany dia mety hampidi-doza ny olona voan'ny dementia.
Ity karazana manezioma ity dia afaka miditra amin'ny lalan-drà ary mamakivaky ny sakana amin'ny ati-dohanao, mora voan'ny sela ary voaporofo fa mampihena ny tosidra ary miaro amin'ny lalan-dra koa.
Ny citrate magnesium dia iray amin'ireo famolavolana maneziôma fahita indrindra ary azo vidiana amin'ny Internet na amin'ny fivarotana manerantany. Ny fikarohana sasany dia manondro fa ity karazana ity dia anisan'ny endrika magoiômazy azo zahana indrindra, midika izany fa mora raisina ao anaty lalan-tsinay noho ny endrika hafa.
Ny citrate manezioma dia manampy indrindra an'ireo olona mijaly noho ny fitohanana, raha toa kosa ny endrika glycise dia mahasoa kokoa amin'ny toe-javatra toy ny tebiteby, tsy fahitan-tory, adin-tsaina maharitra ary aretina.
magnésium ny citrate no mety ho karazana mahomby indrindra raha te hanandrana famenony ianao. Raha tsy ampy magnesium ianao dia mety misy tombony hafa amin'ny fampitomboana ny fihinanana an'io otrikaina io. Ary misy fanafody hafa azo alaina amin'ny fametahana tongotra izay mety hanampy.
Ny fikarohana dia manome soso-kevitra fa ny fihinanana manezioma ho an'ny tebiteby dia mety handeha tsara. Ny fandinihana dia nahatsikaritra fa ny fahatsapana tahotra sy tahotra dia azo ahena be amin'ny fihinanana magnesium lehibe kokoa, ary ny vaovao tsara dia tsy voafetra ho an'ny aretina mitebiteby amin'ny ankapobeny ny valiny.
Ny glycinate magnesium dia matetika ampiasaina ho famenon-tsakafo tsy miankina hanatsarana ny torimaso sy hitsaboana aretina isan-karazany, anisan'izany ny aretim-po sy diabeta. Mora voaroba ny gliokazo magnesium ary mety manana toetra mampitony. Mety hampihena ny fanahiana, ny famoizam-po, ny adin-tsaina ary ny tsy fahitan-tory.
Ankoatry ny fihinanana Magnesium L-threonate hanatsarana ny haavon'ny magnesium ao amin'ny atidohanao dia azonao atao koa ny manararaotra ny sakafo manankarena amin'ireo mineraly ireo. Ireo sakafo ireo dia afaka manampy anao hahatratra ny ambaratonga manezioma ilaina ao an-tsainao sy hankafizanao ny tombo-tsoa mineraly rehetra. Ireto misy sasany amin'ireo Manezioma L-threonate amin'ny sakafo;
Chocolate mainty– na dia matsiro sy mahasalama aza izy dia mitondra magnesium 64mg izay 16% amin'ny RDI. Ankoatr'izay, ny sôkôla mainty koa dia manan-karena amin'ny varahina, vy, ary manganese ary koa fibre prebiotika.
Avocado- ity voankazo matsiro sy mahavelona ity dia afaka manome magozy 58mg anao izay manodidina ny 15% amin'ny RDI. Ny voankazo koa dia manankarena vitamina B, K, ary loharano potasioma lehibe.
Nutsare– fantatra ihany koa ho iray amin'ireo loharano voajanahary Magnesium L-threonate tsara indrindra. 1-ounce manompo cashews dia manana magnesium 82mg izay 20% amin'ny RDI.
Legumessuch– toy ny pitipoà, voanemba, akoho ary soja, dia manan-karena mineraly isan-karazany, anisan'izany ny manezioma. Ohatra, ny kapoaky ny masaka iray kapoaka dia misy magnesium 120mg, ary izany dia 30% an'ny RDI.
Ny magnesium dia sakafo mahavelona ny vatana salama. Ny fakana Magnesium mandritra ny fotoana maharitra dia zava-dehibe amin'ny fizotran'ny vatana maro, anisan'izany ny fifehezana ny fiasan'ny hozatra sy ny hozatra, ny haavon'ny siramamy ao amin'ny rà, ary ny tosidra ary ny fanaovana proteinina, taolana ary ADN.
Ny endrika manezioma be mpilaza matetika fa miteraka fivalanana dia misy magnes karbonat, klôroida, gluconat ary oksida. Ny fivalanana sy ny voka-dratsin'ny sira maneziôma dia vokatry ny asan'ny osmôtika ny sira tsy nositranina ao amin'ny tsinay sy ny tsinay ary ny fanentanana ny fivezivezin'ny gastric.
Ny MgT natelina am-bava dia naseho fa maharitra iray volana farafahakeliny mba hampiakarana ny haavon'ny magnesium ao amin'ny ati-doha raha toa ka misy fiatraikany amin'ny famoronana fitadidiana.
Ny fananana ambaratonga manezioma avo loatra na ambany loatra dia mety hampidi-doza anao amin'ny Alzheimer sy ny dementia hafa, hoy ny tatitry ny mpikaroka holandey.
Rehefa latsaka ambany noho ny mahazatra ny haavon'ny manezioma ao amin'ny vatana dia mitombo ny soritr'aretina noho ny manezioma ambany. Ny antony mahazatra ny magnesium ambany dia misy:
Mampiasa ny toaka
May izay misy fiantraikany amin'ny faritra lehibe amin'ny vatana
Ny fivalanana be loatra (polyuria), toy ny diabeta tsy voafehy ary mandritra ny fanasitranana amin'ny tsy fahombiazan'ny voa mahery vaika
Hyperaldosteronism (aretina izay mamoaka be loatra ny hormonina aldosterôly ao anaty ra ny fihary adrenal)
Aretina tubule voa
Ny syndrome malabsorption, toy ny aretin'ny selika sy ny aretin-kozatra
Fanafody misy ny amphotericin, cisplatin, cyclosporine, diuretics, inhibitors pump proton, ary antibiotika aminoglycoside
Pancreatitis (mamontsina sy mamaivay ny sarakaty)
Be loatra ny hatsembohana
Ny fanandramana momba ny biby sy ny vitro dia manondro fa ny vitamina D dia manana tanjaka ara-pahasalamana amin'ny fisorohana sy fitsaboana ny fihenan'ny kognita sy ny fahaverezan-tsaina. Ny fandinihana roa natao farany dia manondro ihany koa fa ny ambaratonga ambany 25 (OH) D dia mampitombo ny fihenan'ny fihenan'ny kognitika.
Nanambara ilay mpanamboatra fa ny fanampiana magnesium dia manampy amin'ny ady amin'ny fanaintainan'ny hozatra, manatsara ny kalitaon'ny torimaso, ary mampihena ny fanahiana sy ny fihenjanana. Nanazava koa izy ireo fa ity karazana magnesium (magnesium bisglycinate) ity dia malefaka kokoa amin'ny vavony noho ny endrika mineraly hafa.
Ny fanafody magnesium dia azo alaina amin'ny fotoana rehetra amin'ny andro, raha mbola azonao atao ny mandray azy ireo tsy tapaka. Ho an'ny sasany, ny fihinanana fanafody voalohany amin'ny maraina dia mety ho mora indrindra, fa ny sasany kosa mety hahita fa mety tsara ho azy ireo ny mandray azy amin'ny sakafo hariva na alohan'ny hatory.
Manezioma - mineraly manan-danja amin'ny fahasalaman'ny rafi-pitabatabana ary mampihena ny fivontosana.
Ny fanampiana magnesium (Mg) dia naseho nanatsara ny fahasitranana niasa tamin'ny aretina aretin-tsaina isan-karazany. Ny tombony tena ilaina amin'ny famenony Mg amin'ny aretin-kozatra peripheral dia mbola tsy nazava.
Ny fambara mahazatra amin'ny tsy fahampian'ny manezioma dia misy ny fihintsanan'ny hozatra, ny horohorontany ary ny fikorontanana. Na izany aza, tsy azo atao ny mampihena ireo soritr'aretina ireo amin'ny olona tsy ampy fahampiana.
Ny fandinihana nataon'i Parkinson tany am-boalohany dia mahita endrika manezioma afaka mahatratra ny fihenan'ny fihenan'ny moto, ny fahaverezan'ny neuronal
Ny famantarana voalohany ny magnesium ambany dia misy:
Rehefa mihombo ny tsy fahampian'ny manezioma dia mety misy ny soritr'aretina:
gadona fo tsy mandeha amin'ny laoniny
Tao amin'ny fanadihadiana navoaka tao amin'ny Experimental and Therapeutic Medicine, ny mpikaroka dia nahita fa ny turmerika dia mety hiaro ny rafi-pitabatabana amin'ireo poizina tafiditra amin'ny fiterahana ny fihenan'ny rafi-pitabatabana amin'ny aretin'i Parkinson.
Ny fiovan'ny fanafody, ny aretina, ny tsy fahampiana rano, ny tsy fahampian'ny torimaso, ny fandidiana farany, ny adin-tsaina, na ny olana ara-pahasalamana hafa dia mety hanimba ny soritr'aretin'ny PD. Ny aretin'ny lalan-dra (na dia tsy misy soritr'aretin'ny tatavia aza) dia antony iray mahazatra indrindra. Torohevitra: Ny fanafody sasany dia mety hanimba ny soritr'aretin'ny PD.
Ny fanadihadiana vaovao dia manolo-kevitra fa ny fampitomboana ny fihinanana maneziôma, mineraly tena ilaina hita ao anaty legioma maintso sy voankazo, tsaramaso ary voanjo, dia mety hanampy amin'ny ady amin'ny fahatelon'ny fahatsiarovana mifandraika amin'ny fahanterana.
Ny iray amin'ireo anjara asany lehibe indrindra dia ny manampy amin'ny fananganana fiaretana amin'ny alàlan'ny fampitomboana ny fahafahan'ny oxygen ao amin'ny vatana. Fa manampy ihany koa amin'ny: tosidra salama.
Ny fikarohana dia manolo-kevitra fa ny famenoana maneziôma dia mety hanampy amin'ny fampitomboana ny haavon'ny serotonine. Raha ny marina dia ambany ny haavon'ny serotoninina voamarina amin'ny marary tsy fahampian'ny manezioma. Ny fandinihana izay niresaka momba ny fampiakarana serotonine miaraka amin'ny manezioma dia nitatitra fahombiazana.
Ny magnesium dia mitana andraikitra lehibe amin'ny vatana, toy ny fanohanana ny fiasan'ny hozatra sy ny hozatra ary ny famokarana angovo. Ny haavon'ny magnesium ambany dia tsy miteraka soritr'aretina ao anatin'ny fotoana fohy. Na izany aza, ny ambaratonga ambany ambany dia mety hampitombo ny fiakaran'ny tosi-dra, ny aretim-po, ny diabeta karazana 2 ary ny osteoporose.
Gummies milamina voajanahary.
IZAO IZAO Sakafo Capsules legioma manezioma sakafo.
Vitafusion Magnesium Gummy Vitamina.
Fanitarana fiainana Neuro-Mag Magnesium L-Threonate.
Fandraisana an-tanana avo indrindra ho an'ny mpitsabo 100% tablette magnesium Chelated.
Ny glycinate magnesium dia naseho fa manana tombony isan-karazany, anisan'izany ireto manaraka ireto: Misy vokany mampitony ny atidohanao izany noho ny fisian'ny glycine. Izy io dia afaka manampy amin'ny fanalefahana ny fanahiana ary hampiroborobo ny torimaso tsaratsara kokoa. Manampy ny taolana hatanjaka hatrany amin'ny fihazonana ny hakitroky ny taolana.
Betsaka ny endrika manezioma no misy, aleontsika matetika mampiasa citrate manezioma sy / na glycérate magnesium. Ny endrika glycérat manezioma dia ilaina kokoa amin'ny toe-javatra toy ny tebiteby, tsy fahitan-tory, adin-tsaina maharitra ary aretina.
Ny glycinate manezioma dia karazana manezioma lehibe hafa matory. Io no endrika maneziôma be mpitia indrindra ary malefaka amin'ny vavony, ka tsy dia misy vokany laxative na manelingelina ny vavoninao.
Ity fanafody ity dia famenon-karena mineraly ampiasaina hisorohana sy hitondrana magnesium kely ao anaty ra. Ny marika sasany dia ampiasaina ihany koa hitsaboana ireo soritr'aretin'ny asidra vavony be loatra toy ny aretin-kibo, fivalanam-po, ary tsy fihanaky ny asidra.
Na dia heverina ho azo antoka aza ny fanampiana magnesioma dia tokony hanamarina ny mpitsabo anao alohan'ny hitondranao azy ireo - indrindra raha marary ianao. Ny famenon-tsakafon'ny mineraly dia mety tsy azo antoka ho an'ireo olona mihinana diuretika, fanafody am-po na antibiotika sasany.
Zahao amin'ny mpitsabo anao raha mihinana fanafody ianao alohan'ny hihinanana magnesioma. Loza. Ireo olona voan'ny diabeta, aretin'ny tsinay, aretim-po na aretin'ny voa dia tsy tokony hihinana manezioma alohan'ny hiresahana amin'ny mpitsabo azy ireo.
Ny iray amin'ireo famantarana voalohany amin'ny tsy fahampian'ny magnesium dia matetika reraka. Mety hahatsikaritra ny hozatry ny hozatra ianao, ny fahalemena na ny hamafiny koa. Ny fahaverezan'ny fahazotoan-komana sy ny fisaleboleboana dia soritr'aretina mahazatra hafa amin'ny dingana voalohany. Na izany aza, mety tsy mahatsikaritra soritr'aretina mihitsy ianao amin'ny voalohany.
Raha mikasa ny hampiasa fanampiana magnesium ianao ho fanampiana amin'ny torimaso, dia ampirisihinay haka 1-2 ora alohan'ny hatory. Diniho ny manampy magnesium amin'ny fanabeazana anao.
Ny fatra mineraly goavambe dia afaka mifaninana hifampikasokasoka. Aza mampiasa kalsioma, zinc, na manezioma menaka miaraka amin'izay.
Manezioma L Threonate mampihetsi-po dia afaka manatsara ny toe-po, ny adin-tsaina be loatra, ary ny fihenan'ny alahelo. Ankoatr'izay, taratasy iray hafa navoaka tao amin'ny diary Pain Physician no nahita fa manezioma L-threonate manakana sy mamadika ny tsy fahatsiarovana mifandraika amin'ny fanaintainan'ny neuropathique mitaiza.
Ny endrika maneziôma manalefaka tsara anaty ranoka dia voadoka tanteraka ao anaty tsinay noho ny endrika tsy mety levona. Ny fandinihana kely dia nahatsikaritra fa ny maneziôma amin'ny endrika aspartate, citrate, lactate, ary chloride dia voadoka tanteraka kokoa ary azo ovaina kokoa noho ny magnesium oxide sy magnesium sulfate.
Ny doka latsaky ny 350 mg isan'andro dia azo antoka ho an'ny ankamaroan'ny olon-dehibe. Amin'ny olona sasany, ny manezioma dia mety hiteraka fikorontanan'ny vavony, maloiloy, mandoa, fivalanana ary vokany hafa. Rehefa alaina amin'ny vola be dia be (lehibe kokoa noho ny 350 mg isan'andro), ny magnesium dia TSY MAINTSY TSY MISY.
Ny magnesium dia mineraly manan-danja izay tafiditra amin'ny lafiny maro amin'ny fahasalamanao. Ny National Academy of Medicine dia manoro hevitra ny tsy hihoatra ny 350 mg magnesium fanampiny isan'andro. Na inona na inona fihinanana maneziôma anao hanatsarana ny vatanao amin'ny fotoana rehetra amin'ny andro, raha mbola azonao atao ny mandray azy ireo tsy tapaka.
mampihena na misoroka ny sakafo misy be kalsioma adiny roa alohan'ny na aorian'ny fihinanana sakafo be manezioma.
manalavitra ny famenon-tsiranoka be zika.
fitsaboana ny tsy fahampian'ny vitamina D.
mihinana legioma manta fa tsy mahandro azy.
Ny magnesium dia mineraly manan-danja ary ampiasain'ny vatana izy amin'ny fanehoana metabolika 300 samihafa. Io koa ny singa fahefatra be dia be indrindra ao anatin'ny vatan'olombelona. Ny vatana dia mampiasa magnesium ho an'ny fitsipiky ny tosidra, fanamafisana ny hozatra, famindrana ny fambara amin'ny nerve ary ny famokarana angovo. Satria mineraly be dia be ny magnesium, ny tsy fahampian'izany dia mety mitarika aretina maro isan-karazany, ao anatin'izany ny migraine, ny diabeta karazana-2, ny fikorontanan'ny mood sy ny aretim-po samihafa. Na dia azo avy amina loharano voajanahary samihafa aza io mineraly io, ao anatin'izany ny legioma, ny voanjo, ny voa ary ny voanjo, ny ampahatelon'ny mponina eran'izao tontolo izao dia mijaly noho ny tsy fahampiana. Noho izany, dia matetika ny olona no nanoro hevitra ny mandany magnesium amin'ny endrika fananganana. Iray amin'ireny magnesium fanampiny ireny izay be mpitia malaza tato ho ato, dia Magnesium L-threonate.
Amin'ity lahatsoratra ity dia lazainay aminao izay rehetra misy momba ny Magnesium L-threonate sy ny antony tokony handanianao azy. Vakio hatrany.
Ny fikarohana dia mampiseho fa ny Magnesium L-threonate dia azo antoka ary mandefitra tsara amin'ny vatana rehefa esorina amin'ny fatra latsaky ny 350 mg isan'andro. Na izany aza, ny fitomboan'ny Magnesium L-threonate dia mitarika amin'ny voka-dratsiny, toy ny fisosotra, mandoa, sns. Raha sendra misy ny soritr'aretina ianao, na manadihady dokotera na mampihena ny habetsaky ny fatranao. Magnesium L-threonate, rehefa raisina betsaka, dia mampitombo ny fananganana magnesium ao anaty vatana, izay mitondra amin'ny toe-javatra toy ny fihenan-dra, ny fitomboan'ny fitomboan'ny fo, ny fifohana rivotra mamelona, ​​sns. Tsara kokoa ny manadihady ny dokoteranao alohan'ny hanombohana Magnesium L-threonate fanampiny. Io zava-mahadomelina io dia azo antoka amin'ny vehivavy bevohoka sy mampinono ary koa ny ankizy rehefa alaina amin'ny habetsaky ny fatra ambany.
Andeha hojerentsika ny sasany amin'ireo tombontsoa azo avy amin'ny Magnesium L-threonate ary andramo ny hahafantatra ny antony ananan'ity loharano magnesium ity laza malaza toy izany.
① Manezioma L-threonate Miady amin'ny fomba mahomby amin'ny ADHD
Ny iray amin'ireo antony lehibe mahatonga ny lazan'ny Magnesium L-threonate dia ny fahafahany manatsara ny haavon'ny magnesium ao amin'ny ati-doha. Koa satria mora entin'ny vatana io sira io, dia fomba iray mahomby hahatonga ny magnesium hanatratra ny selan'ny ati-doha. Ny magnesium dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fampiroboroboana ny fahasalamana ara-pahalalana - izy io dia afaka mamadika ny soritr'aretin'ny fahanton'ny ati-doha, toy ny ADHD na ny tsy fahampian'ny saina. Satria ny ADHD dia toe-javatra mila fotoana fohy hampivelarana, ny olona dia tsy mahatsapa fa manana ADHD mandra-pahatongany any amin'ny toerana iray izay lasa sarotra ny mamaha azy. Ny magnesium L-threonate, noho izany, dia mitana andraikitra lehibe amin'ny fampiroboroboana ny fahasalamana ara-tsaina, indrindra amin'ny raharahan'ny be taona sy ny fanalavirana ny ADHD. (1). Sun, Q., Weinger, JG, Mao, F., & Liu, G. (2016).
② Izy io dia fahatsiarovana mahatalanjona sy famenon-tsaina manatsara
Rehefa mihantitra ny olona dia manomboka mihena ny atidohan'izy ireo. Mitranga izany noho ny fahaverezan'ny synapses ary miteraka fihenan'ny kognitif eo amin'ny fiainana. Ny fandalinana fikarohana natao nandritra ny taona maro dia nanaporofo fa ny Magnesium L-threonate dia manatsara ny haben'ny synapses ao anaty atidoha, izay, kosa, dia mitarika fahatsiarovana bebe kokoa sy fampandehanana fahatsiarovan-tena. Amin'ny teny tsotra, ny magnesium izay nomen'ny Magnesium L-threonate dia mety hanimba ny fahanterana amin'ny atidoha ary noho izany dia manentana ny fahasalamana ara-tsaina, indrindra eo amin'ny zokiolona.
③ Manampy amin'ny ady amin'ny famoizam-po sy ny fanahiana izany
Ny fahakiviana sy ny tebiteby dia lasa olana mahazatra. Ny rivotry ny tsy fahatokisana natsangan'ny pandemotra ankehitriny COVID-19 dia nahatonga ireo olana ireo hitranga. Ny fandalinana dia nanisy fifandraisana misy eo amin'ny magnesium sy ny hakiviana sy ny tebiteby. Koa satria ny magnesium dia misy fiantraikany mivantana amin'ny rafi-pitatitra, izany dia mety hahatonga ny olona iray hahatsapa ho milamina ary tsy mahazo aina. Araka izany, ny Magnesium L-threonate dia afaka mitana andraikitra lehibe amin'ny fanalefahana ny fahaketrahana sy ny tebiteby.
④ Manatsara ny fahasalaman'ny taolana sy ny hozatra izany
Ny tsy fahampian'ny magnesium dia mifamatotra koa amin'ny taolana sy ny hozatra malemy ary ny heho. Noho izany, ny olona mijaly amin'ny osteoporosis dia matetika no nanoroana ny haka Magnesium L-threonate ho toy ny magnesium supplement. Ankoatr'izay, io sira io dia matetika no nanoroana azy ho toy ny fanaintainana fanavahana amin'ny fanaintainana.
⑤ Manampy ny olona matory tsara ny magnesium L-Threonate
Fikarohana fikarohana maromaro no nanaporofo fa raha matory tsara ny olona dia tsy maintsy manana ny maneziôma mety azy izy ireo. Ny magnesium dia mampihetsika ny rafi-pitabatabana parasympathetic, izay mampihena ny vatana iray manontolo. Ny tena zava-dehibe dia ny manezioma manambatra amin'ireo mpandray GABA ao anaty vatana ary mampitony ny rafi-pitabatabana iray, amin'izay mamela ny saina sy ny vatana hahatsiaro ho tony. Manezioma L-threonate dia manome antoka fa misy maneziôma be dia be ao anaty vatana mba hiantohana ny alina torimaso tsara.
Ankoatra ny tombontsoa rehetra voalaza etsy ambony, Magnesium L-threonate dia ampiasaina ihany koa ho an'ny tanjona hafa. Io sira dia omena mba hanamaivanana ny fanaintainana aorian'ny hysterectomy. Ampiasaina izy io mba hanamaivanana ny fanaintainan'ny tratran'ny aretin'ny clogged. Farany, asio sira io dia naseho ihany koa hanampy amin'ny fatiantoka, ny fibromyalgia ary ny diabeta. Ny olona sasany aza dia mandray izany hampihena ny haavon'ny kolesterola azony.
Raha mitady ny hiditra ao amin'ny famenon'ny Magnesium L-threonate ianao dia mila mpamatsy akora azo itokisana sy azo itokisana. Raha mitady toerana hividianana vovoka Magnesium L-threonate ianao amin'ny ankapobeny, miantsena ao Cofttek. Ny orinasa dia fantatra ao anatin'ny indostrian'ny biomédical noho ny fikajiana fakafakao sy ny fahaizan'ny fikarohana kalitao. Cofttek koa dia manana ekipa mpitantana efa za-draharaha sy ekipa R&D kilasy voalohany miaraka amin'ireo manam-pahaizana manerantany.
Niorina tamin'ny taona 2008 i Cofttek ary tao anatin'ny taona vitsivitsy monja dia namorona anarana ho an'ny tenany manokana ny orinasa, ao anatin'izany ny teknolojia synthetic, ny fivoaran'ny zava-mahadomelina, ny bioengineering, ny simia pharmaceutika, sns. Androany, manana mpanjifa any Amerika Avaratra, India ny orinasa , Sina sy Eropa ary ny politikany 'Basis kalitao, Customer First, Honest Service, Mutual Benefit' dia nanampy azy hamorona mpanjifa sambatra eran'izao tontolo izao. Magnesium L-threonate nomen'ny orinasa dia tonga amin'ny amponga 25 kgs ary azo atokisana amin'ny vokatra avo lenta ny vokatra tsirairay. Noho izany, raha mila vovoka Magnesium L-threonate ianao amin'ny ankapobeny, miantsena ao amin'ny cofttek.com.
Koa satria ny magnesium dia miara-miasa akaiky amin'ny kalsioma, zava-dehibe ny fananana refy mifanaraka amin'ny mineraly roa mba hahomby. Ny fitsipika tsara momba ny ankihibe dia ny tahan'ny kalsioma-to-magnesium 2: 1. Ohatra, raha mihinana kalsioma 1000mg ianao dia tokony hihinana maneziôma 500mg koa.
(1). Sun, Q., Weinger, JG, Mao, F., & Liu, G. (2016). Ny fifehezana ny hakitroky ny synaps amin'ny rafitra sy ny fomban'ny L-threonate amin'ny alàlan'ny fanodinana ny fifantohana magnesium intraneuronal. Neuropharmacology, 108, 426-439.
(2). Mazreku, IN, Ahmetaj, H., Aliko, V., Bislimi, K., Halili, F., & Halili, J. (2017). Fihetseham-po amin'ny Catalase (CAT), ALT ary AST amin'ny karazany samihafa amin'ny totozy Swiss Albino voatsabo amin'ny Lead Acetate, Vitamin C ary Magnesium-L-Threonate. Gazety fikarohana ara-pahasalamana sy diagnostika, 11 (11).
(3). Mickley, GA, Hoxha, N., Luchsinger, JL, Rogers, MM, & Wiles, NR (2013). Manezioma-L-threonate fihinanana sakafo maharitra dia mandringana ny fahaverezana ary mampihena ny fanarenana tampoka ny fanilihana tsiro. Biochemistry sy fitondran-tena momba ny farmasia, 106, 16-26.
(4).Manezioma l-threonate (778571-57-6).
Mahatonga ahy hahatsiaro marary amin'ny lohako. Hiezaka hampihena ny fatra
Nanatsara ny fitadidiako fohy sy maharitra aho, ary nanjary voalanjalanja kokoa tamin'ny lafiny maro. Mahazo fanamafisana Dopamine kely koa aho ary fanamafisana testosterone kely izay mijanona ho tsy miova ary mihena kely fotsiny. Ny torimaso dia azo hatsaraina mba hahatonga ny adiny 7 hahatsapa ho 9 nefa ny mag glycinate dia manakorontana izany fanambarana izany ho ahy saingy mbola mijanona ao aoriana aho, ny sasany, ny fampitomboana ny torimaso.
Magnesium L-threonate (MgT) dia micronutrient mahomby amin'ny fanatsarana ny fiasa, ny saina ary ny fitadidiana episodika, ny fiasan'ny kognita mpanatanteraka, ary ny fihenan'ny adin-tsaina sy ny fanahiana amin'ny ankapobeny.
Ny dokotera sasany dia manome sosokevitra ny hanampiana 2000 mg magnesium hiadiana amin'ny fahaketrahana.
Tsara izany, mandra-pahatsapako fa ny magnesium L-Threonate dia mandaitra kokoa amin'ny fidirana amin'ny BBB (Ra, atidoha, sakana). Izany dia refesina amin'ny alàlan'ny haavon'ny magnesium ao amin'ny tsiranoka hazondamosin'ny ati-doha. Raisiko ho fahatsiarovana sy fahaketrahana.
Howdy! Ity lahatsoratra ity dia tsy azo nosoratana tsara lavitra! Mampahatsiahy ahy ilay mpiray trano amiko taloha ny fijerena an'ity lahatsoratra ity! Tsy nitsahatra nitory momba izany izy. Handefa ity lahatsoratra ity any aminy aho. Azo antoka fa hanana famakiana mahafinaritra izy. Misaotra ny fizarana!
Manampy ahy hatory lalina kokoa i Theonate.
Izaho dia naka 600mg an'ny Alpha GPC, 300mg Uridine, ary 2,000mg an'ny Mag L-Threonate ho fatoriako torimaso tato ho ato ary tena nandeha tsara io. Mahatsiaro ho matory 10-25% kokoa aho. Matory haingana kokoa koa aho rehefa mifoha amin'ny alina.
fandaharana teknolojia fandidiana hopitaly
Fampahalalana mahasoa. Soa ihany aho fa hitako tsy nahy ny tranonkalanao, ary gaga aho hoe maninona no tsy nitranga teo aloha io lozam-pifamoivoizana io! Nanoratako tsoratadidy izany.
Momba ny magnesium L-Threonate mampiasa fotoana, 22% maraina ary 11% amin'ny alina no mandeha tsara indrindra.
Raha be loatra aho indraindray dia mety ho fanoherana ny kognitika izany, ny vokany tsara indrindra dia aorian'ny 2 herinandro nisesy ary matetika tsy azoko ampiasaina amin'ny fahombiazana fotsiny amin'ny fampivoarana ny fahombiazana amin'ny faniriana irery.
Mahita olona maro aho mitatitra ny voka-dratsy toy ny aretin'andoha, tsy fahitan-tory, angovo ambany sns.
Thiamine dia cofactor ho an'ny maneziôma, ary ny magôdiôma ambony fatra dia mety hampidina ny thiamine, ary ny vica-versa.
Andramo ny mihinana thiamine (B-1) miaraka na aorian'ny famenonanao manezioma, ary jereo raha mbola mitohy ny voka-dratsy.
Tsara izany, fa raha hiaraka amin'izy ireo ianao dia manomboka kely. Raha manana olana amin'ny torimaso sy fahamendrehana ianao dia mety hataon'ny mag threonate izany amin'ny voalohany. Tsy nanomboka akory aza aho tamin'ny doka natolotray ny tavoahangy, izay 1000 mg 2 ora alohan'ny hatory mandritra ny herinandro voalohany. Satria io dia mety hitazona anao amin'ny zavona mandritra ny fotoana kelikely.
Maka 1-2gs alohan'ny hatory aho ary angamba satroka 500mg iray isa-maraina raha mahatsapa ho tsy salama.
Mahavariana fa manana eritreritra amin'ity lahatsoratra ity ianao ary koa amin'ny fifanakalozan-kevitra ataonay eto amin'ity toerana ity.
Manezioma L-Threonate dia miteraka fidiran'ny magnesium avy amin'ny habaka extracellular mankany amin'ny habaky ny neurônaly. Tsy izany no mitranga amin'ireo sira manezioma hafa.
Afaka manampy amin'ny torimaso haingana kokoa izany ka adiny 1 alohan'ny hatoroana ny torimaso. Ny tavoahangy famenonanao dia mety miantso pilina 3 na 4 isan'andro. Izany dia satria lehibe ny magnesia threonate, lehibe ny ampahatelon'ny molekiola. Sasao mandritra ny andro ny fatra mba hampitomboana ny tsimokaretina, saingy angamba alamino ilay izy mba hihinanana bebe kokoa aorian'ny sakafo farany nataonao.
Ny L-Threonate dia misy fiantraikany mivantana amin'ny ati-doha tsy mitovy amin'ny endrika magnesium hafa.
Rehefa mandeha amin'ny zavatra maro izay misy fiatraikany mivantana amin'ny ati-doha dia mety misy vanim-potoana mampifanaraka izany ka manome fotoana azy.
Inona no zava-drehetra, ny atiny misy amin'ity tranonkala ity raha ny marina dia miavaka amin'ny fahalalan'ny olona, ​​tohizo hatrany ny asa tsara.
Ity torimaso ity dia miampy fanentanana eo ambonin'ny tsy fahitan-tory amin'izao fotoana izao mety hiainanao. Alao ihany ny maraina sy amin'ny fatra antonony ambany manomboka izao.
Raha ny Mag-L-Threonate dia mandeha, ny fahalalako azy dia ny L-threonate dia mpitatitra ambony ary manamora ny habetsaky ny manezioma manantona ao amin'ny ati-doha izay azo ampiasain'ny neurons? Raha ny fanadihadiana natao dia nanaporofo fa marina izany. Tsy haiko na fampitandremana fotsiny izany na tsia. Aleoko mandray L-threonate raha azoko atao amin'ny ankapobeny, raha tsy izany mifikitra amin'ny chelate fotsiny aho.
Angamba L-threonate magnesium 2 grama, manome magnesoma miisa 144mg.
Ny endrika Threonate dia voafaritra tsara ao amin'ny ati-doha ary mety mandaitra lavitra amin'ny fampitomboana ny atin'ny magnesia ao amin'ny ati-doha na dia tsy misy magnesium kely aza ao anatiny.
Nanomboka naka ny vokatra Magnesium L-Threonate aho tamin'ny alina alohan'ny hatory sy ny wow - rehefa afaka efatra na dimy andro dia nanomboka nahatsikaritra fanatsarana kely aho tamin'ny fitadidiana, fitazonana antontan-kevitra isan-karazany any am-piasana, avy eo rehefa afaka herinandro maromaro, fanatsarana lehibe kokoa izay ahatsiarovako anarana sy zava-misy hatramin'ny taona lasa. Talohan'ny nandraisako an'io dia niady tamin'ny fahatsiarovan-tena kely momba ny zavatra kely sy lehibe aho ary mikasika ny ampy izany dia niresaka tamin'ny PCP aho ary nahita mihitsy aza ny Neurologist iray izay nanamarina ahy fa manana fahasembanana ara-pahalalana "malefaka" ary tonga hatramin'ny fanatontosako nomerao iray aza. fitsapana mba hialana amin'ny Alzheimer.
Raisiko ny fatra voatavo amin'ny kapsily telo izay manome 144 mg magnesium L-Threonate isan'alina. Nanova ny fiainako io.
Ny vokatra tsara iray dia ity no toa nanatsara ny torimasoko ary tadidiko matetika ny nofiko izao.
Izaho dia naka vovoka Magnesium L-Threonate efa ho 10 volana izao, 1.0 - 1.2g isan'andro. Ampiasaiko ho fanampiana amin'ny torimaso izy, ary mahavariana tokoa. Tsy afaka milaza fa nahatsikaritra vokany ivelan'io aho.
Magnesium L-threonate dia mahatalanjona. Azonao atao ny google ny anaran'ny Magtein. Manadio ny zavona amin'ny ati-doha, manamaivana ny fanahiana, manampy anao hatory, hahatonga anao ho hendry kokoa ary hanampy amin'ny fahaketrahana. Ny ray aman-dreniko dia samy afaka niala tamin'ny antidepressants tamin'ny fifindrana tany Magtein. Mampiasa azy isan'andro aho ary tsy ho very izany.
1g-2g adiny iray alohan'ny hatory. 500mg ho an'ny fampiasana andro, raha ilaina amin'ny fitaintainanana. Iray amin'ireto akora ireto izay tena mahavoa anao raha vantany vao rava, midika izany fa tsy tsara amin'ny famokarana rehefa eo io fa mampitoetra ny sainao izany ary mamela ny fanafody izay misy vokany tsara kokoa ny mpandray azy ireo rehefa efa nanao ny asany i Mg. Misy dikany ve izany? Izany no antony alohan'ny hatory dia tsara dia tsara, satria mifoha ianao satria nanome ny sainao fialan-tsasatra amin'ny fanentanana. Ny vokatra dia mitombo, saingy tsy izany, tena nahatsapa fahasamihafana aho tamin'io maraina io taorian'ny nandraisako azy voalohany.
Namaly i Jennie.
Manezioma be loatra dia hiteraka seza malalaka. Ho an'ny ankamaroantsika dia mihoatra ny 200 mg isan'andro izany. Ny olona sasany dia mahazaka magnesium fanampiny amin'ny 500 mg tsy misy olana.
Ny fatra atoro ahy dia 144 mg magnesium (tsy misy fangarony) isan'andro. Ny olona sasany somary rendremana amin'ny voalohany, ny sasany kosa mahatsikaritra fitomboan'ny fahatsapana ny fikorianan'ny rà ao an-doha, fa ny sasany kosa mety marary loha. T Raha mihinana magnesium ianao amin'ny fitohanana, dia mety te hanandrana manohy ny doka misy anao ianao izao rehefa manampy ny Mg Threonate.
Raha mamorona seza madiodio ianao dia ajanony ny endrika Mg teo aloha.
Manantena aho fa hanampy anao!
Magnesium L-Threonate - inona no efa niainanao?
Nisy olona teto ve naka ny Magnesium L-Threonate ho famenony? Inona no efa niainanao?
Fotoana firy no nitondranao azy ary ohatrinona?
Nanao ahoana izany talohan'ny nanombohanao naka azy, raha teo amboninao ianao, ary rehefa avy nijanona tsy naka azy ianao raha nanao izany?
Heveriko fa ny admin an'ity tranonkala ity dia tena miasa mafy amin'ny fanohanana ny tranokalany, noho ny antony eto ny zavatra rehetra dia angona mifototra amin'ny kalitao.
Hitako fa ny magnesium L-threonate dia fiatraikany ara-tsaina sy mifantoka kokoa, fa ny glycinate kosa dia fialana sasatra amin'ny vatana.
Tsara ny manandrana azy roa raha ny hevitro.
Ny Threonate ao aminy dia endrika asidra-asidra dia naseho ho mpanakana ny Acetylcholinesterase. Ka raha saro-pady amin'ny kôlôjia ianao ary mahatsikaritra fihetseham-po ketraka na fiatraikany ratsy avy amin'ny fanampin-tsakafo toa ny Huperzine A, Alpha GPC, menaka trondro be dosika, dia ho saro-kenatra amin'ny Mag Glycinate aho.
Noho ny fandaniam-bola dia nijanona nandritra ny taona maro aho nanandrana maneziôma l-threonate.
fa ho ahy dia manatsara ny torimasoko izany, ny tena zava-dehibe dia ny tsy fitoviana ny haavon'ny fitoniana azoko tratry ny andro aorian'ny nandraisako azy.
Tsy mba nahazo tombony na fahatsapana fanahiana avy amin'ny endrika magnesium hafa toy ny glycinate aho, fa azoko manokana avy amin'ny l-threonate.
Magnesium L-threonate dia mety ho endrika maneziôma tsara indrindra ho anao raha mitady hanatsara ny fahasalaman'ny ati-doha indrindra ianao.
Na dia mety hampisondrotra ny haavon'ny magnesium amin'ny vatana aza izy io amin'ny ankapobeny, dia mety ho matanjaka kokoa aza ao amin'ny ati-doha.
Miasa ity zavatra ity, indrindra amin'ny faharetan'ny torimaso sy ny kalitaony.
Nanandrana endrika Mg hafa aho ary omeny ahy fotsiny ny fihazakazahana.
Noraisiko i Melatonin, ZMA, Skullcap, 5-HTP, GABA, Gingko, Valerian, PhosphatidylSerine, tsy misy miasa maharitra sy mandaitra toy ny endrika L-Threonate an'ny Mg.
Fanandramana magnesium L-Threonate?
Vao haingana aho no nividy Magnesium L-Threonate ary tsy nanana zavatra hafa afa-tsy traikefa nahafinaritra tamin'izany. Tsy dia mitebiteby loatra aho, vitsy ny zavona ao amin'ny ati-doha, mahatsiaro tena ho toy ny 'tenako' aho amin'ny lafiny iray, sns. Manome doka manodidina ny 1-1.5g isan'andro aho.
Manontany tena aho raha toa ka nisy olona nanana traikefa nitovy na tamin'ity karazana Magnesium ity?
Ny magnesium L-Threonate dia mampiadana ahy ary manampy ny torimasoko.
FANOMPOANA NY LABEL misokatra ny MAGNESIUM L-THREONATE amin'ireo marary miaraka amin'i Dementia
Any Etazonia, dia tombanana ho 5.2 tapitrisa ny trangana Alzheimer's Disease (AD), miaraka amin'ny AD sy dementia hafa izay mahatratra 1 amin'ny olon-dehibe efa ho 3. Miaraka amin'ny enta-mavesatra ara-bola sy ara-pihetseham-po amin'ny fikarakarana ny marary dia ilaina ny mitady fitsaboana azo antoka sy mahomby. Ny fikarohana vao haingana momba ny vokatra ara-pahalalan'ny Magnesium L-Threonate (MGT) dia manondro fa ny fanampiana dia mety hahasoa ny olona manana AD. Na dia voafetra aza ny data momba ny fizahan-tany momba ny biby sy ny olombelona momba ny valin'ny neural sy kognitive aorian'ny famenoana ny MGT, dia manomboka mipoitra ny fanazavana mekanika ny vokatry ny MGT, ao anatin'izany ny fampiakarana ny làlan'ny famantarana NMDAR. Ny fizahan-toetra amin'izao fotoana izao dia nandinika ny vokatry ny fampiasana MGT amin'ny marary marary dementia malemy ka hatramin'ny antonony. Maromaro ambin'ny folo ny marary nandalo sary 18F-FDG-PET, fitiliana kognitive ary ra nidina tamin'ny làlan-kizorana sy tamin'ny fitsaboana 12 herinandro mba hanombanana ny fiatraikany vokatry ny famenonan'ny MGT amin'ny hippocampal sy ny prefrontal cortex mediated fahaiza-manao kognitifa anisan'izany ny fahefana mpanatanteraka, ny saina, ny hafainganam-pandeha , fitenenana am-bava sy fahatsiarovana. Ny fanandramana kognitifa sy ny fisintonana rà dia natao ihany koa taorian'ny 8 herinandro nijanonan'ny MGT. Ny fikarohana dia naneho fanatsarana lehibe teo amin'ny metabolisma cerebral isam-paritra miaraka amin'ny fanatsarana ny index global of kognitive functioning in the total sample after 12 herinandro ny fitsaboana MGT. Ny fitomboan'ny haavon'ny magnesiazy mena dia mifandraika amin'ny fanatsarana ny fahalalana ankapobeny sy ny fiasan'ny mpanatanteraka amin'ny sasany fa tsy ny marary rehetra. Ny fisedrana klioban'ny placebo lehibe kokoa dia ilaina mba hanombanana ny MGT ho toy ny fanafody fitsaboana mahomby, mora azo ary mora vidy ho an'ny olona manana AD.
Ny fahombiazany sy ny fiarovana ny MMFS-01, mpampitombo ny fahasamihafan'ny Synaps, amin'ny fitsaboana ny fahasembanana amin'ny kognita amin'ny olon-dehibe antitra: fitsapana tsy voafehy, jamba indroa, fanaraha-maso voafehy ac
Tena tsy misy olana ny mitady raharaha amin'ny Internet raha oharina amin'ny boky, toy ny nahitako an'ity lahatsoratra ity tao amin'ity tranonkala ity.
Mahatalanjona! Ilay lahatsoratra tena mahatalanjona, manana hevitra mazava tsara momba an'ity lahatsoratra ity aho.
Fanontaniana momba ny dosie Magtein (L-threonate)？
Salama, manontany tena aho ho an'ireo olona nampiasa Magtein na L-threonate taloha, hoe inona ny dosie isan'andro, indrindra raha mihodina eo anelanelan'ny endrika magnesium hafa izy ireo.
Amin'izao fotoana izao dia mandray glycinate ~ 3600mg isan'andro aho (1800mg amin'ny maraina, 1800mg amin'ny alina). Araka ny marika, mihoatra ny 100% isan'andro ny lanjan'ny magnesium, saingy io no fatra izay tsapako fa manala ny ankamaroan'ny fikorontanana sy ny hozatra.
Manontany tena ihany koa aho, satria ny 2000mg an'ny Magtein dia magnesium 36% isan'andro fotsiny, ary ny 2000 mg Magtein no MAXIMUM izay atolotra isan'andro, azo atao ve ny mahazo magnesioma ampy avy amin'ny L-threonate, sa mampiasa karazana magnesium hafa ny olona ao amin'ny miampy L-threonate, rehefa mandray L-threonate?
Misaotra amin'ny fanampiana. Sambany nanandrana L-threonate ho ahy.
Izaho dia naka vovo-drononoan'ny magnesium L-Threonate an'ny ND efa ho 10 volana izao, 1.0 - 1.2g isan'andro. Ampiasaiko ho fanampiana amin'ny torimaso izy, ary mahavariana tokoa. Tsy afaka milaza fa nahatsikaritra ny vokany ivelan'izany aho.
Magnesium L Threonate voajanahary voajanahary? Magnesium L Theronate dia misy patanty raha tena Mag. Mety ho io raikipohy io ihany no tsy miraharaha ny marika mivarotra azy.
Araka ny fantatro, l-threonate dia endrika iray izay mampiroborobo ny neurotransmission ho an'ny mazava sy ny fifantohana. Glycinate ho an'ny fihenjanana / hozatry ny hozatra ary ny fifehezana ny tosidra. Citrate mba hampitony ary afaka manampy amin'ny fahazarana.
Mahazo sitraka amin'ireo soritr'aretina notantarainao aho.
Magnesium dia electrolyte manan-danja ao amin'ny vatanao ka ento isan'andro.